Chlorpromazine (ကလိုပရိုမဇင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Chlorpromazine (ကလိုပရိုမဇင်း)
Chlorpromazine (ကလိုပရိုမဇင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Chlorpromazine (ကလိုပရိုမဇင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Chlorpromazine (ကလိုပရိုမဇင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Chlorpromazine ကလိုပရိုမဇင်း ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေအတွက်သုံးပါတယ်။ Chlorpromazine ဟာ ပိုပြီး ကြည်လင်စွာတွေးခေါ်နိုင်စေတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းကိုလျော့ကျစေတယ်၊ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အကူအညီဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်တို၊ စိတ်ဆတ်ခြင်းကို လျှော့ချပေးပြီး မိမိကိုယ်နဲ့အခြားသူတွေကိုနာကျင်အောင် ပြုလုပ်လိုစိတ်တွေကိုလျှော့ပေးနိုင်ပါတယ်။ မရှိသည့်အရာကိုမြင်ခြင်း၊၊ ကြားခြင်းကဲ့သို့ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်းများကိုလည်း လျှော့ချပေးပါတယ်။
phenothiazine antipsychotics ဆေးအုပ်စုထဲမှာပါတယ်။ ဦးနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ သဘာဝဟော်မုန်းတွေကို ညှိပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်းကိုလည်း ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သလို၊ ခွဲစိတ်မှုမတိုင်ခင် စိတ်လှုပ်၇ှားခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း ၊ ကျို့ထိုးခြင်းတို့ကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
Chlorpromazine (ကလိုပရိုမဇင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်၊ ဆေးပေးသူ ညွှန်းသည့်အတိုင်းလိုက်နာပါ။ သိလိုသည်များရှိပါက ရှင်းလင်းအောင်မေးမြန်းပါ။
အစာနဲ့၊ သို့ အစာမပါဘဲ သောက်နိုင်တယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်းသောက်ပါ၊ များသောအားဖြင့် တစ်ရက် ၂ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်ဖြစ်နိုင်တယ်။
ပမာဏက အသက် ၊ ရောဂါအခြေအနေ၊ ကုသမှုအပေါ်တုံ့ပြန်ခြင်း တို့အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ အလေးချိန်ပေါ်မူတည်တယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုလျှော့ချဖို့ ပမာဏနည်းနည်းမှစပြိး တဖြေးဖြေးတက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ကို သေချာလိုက်နာပါ။
အကောင်းဆုံးအာနိသင်ရစေဖို့အတွက် ပုံမှန်သောက်ပါ။ မမေ့စေရန် အချိန်မှန်သောက်တာ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
တချို့သောအာနိသင်ကို ချက်ခြင်းသတိပြုမိနိုင်ပေမယ့် အာနိသင်အပြည့်ရဖို့က ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါတယ်.။
ဆရာဝန်နဲ့မတိုင်ပင်ဘဲရပ်မပစ်ပါနဲ့။ ဆေးရုတ်တရတ်ရပ်လိုက်လျှင် တချို့သောအခြေအနေတွေက ပိုဆိုးလာနိုင်ါပတယ်။ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ မူးခြင်း၊ တုန်ယင်ခြင်း၊ ဗိုက်မအီမသာဖြစ်ခြင်း တွေလိုလက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ထိုလက္ခဏာတွေကို လျှော့ချပေးဖို့ ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏတဖြေးဖြေးလျှော့ချပေးပါလိမ့်မယ်။ လက္ခဏာတွေမသက်သာပါက၊ ပိုဆိုးလာပါက ဆရာဝန်ကိုချက်ခြင်းပြောပါ။ သေချာတိုင်ပင်ပါ။
Chlorpromazine (ကလိုပရိုမဇင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Chlorpromazine (ကလိုပရိုမဇင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ရူးသွပ်ခြင်းကဲ့သို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေအတွက် သုံးလို့မရပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့တဲ့နေသော အသက်ကြီးသူတွေမှာ နှလုံးထိခိုက်ခြင်း၊ အဆုတ်ရောင်ခြင်းနဲ့ ရုတ်တရတ်သေဆုံးခြင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဦးနှောက်ထိခိုက်မှုရှိထားလျှင်၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီပြဿနာရှိလျှင်၊ သို့မဟုတ် အရက်အလွန်အကျွံသောက်ထားလျှင်၊ အိပ်ငိုက်စေသောဆေးများမှီဝဲနေလျှင် မသုံးပါနဲ့။
chlorpromazine ၊ fluphenazine (Permitil), perphenazine (Trilafon), prochlorperazine (Compazine, Compro), promethazine (Adgan, Pentazine, Phenergan), thioridazine (Mellaril), or trifluoperazine (Stelazine) ကဲ့သို့ phenothiazines များနဲ့ဓါတ်မတည့်ပါကလည်း မသုံးပါနဲ့။
ရင်သားကင်ဆာ (အရင်က သို့ လက်ရှိ)
ဆီးကျိတ်၊ အခြားဆီးသွားခြင်းဆိုင်ရာ ပြနာများ
chlorpromazine သို့ အခြား phenothiazine ဆေးများနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရပါက
အပူချိန်လွန်ကဲမှု၊ သို့ ပိုူးသတ်ဆေးများနှင့် အထိအတွေ့ရှိပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
ဖျားနေသော၊ တုပ်ကွေးလက္ခဏာများရှိသော ကလေးများကို ဆေးမပေးခင် ဆရာဝန်နှင့်အရင်တိုင်ပင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Chlorpromazine (ကလိုပရိုမဇင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Chlorpromazine (ကလိုပရိုမဇင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
မျက်လုံး၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ မျက်နှာ၊ လက်မောင်း၊ ခြေထောက် တွင် ထိန်းမရအောင် တုန်ယင်ခြင်း များရှိပါက
သွားရည်ကျခြင်း၊ မြိုရခက်ခြင်း၊ ဟန်ချက်မထိန်းနိုင်ခြင်း
ပျို့ခြင်း၊ ဗိုက်မကောင်းခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ အသားဝါခြင်း
အသားရောင်ဖျော့ခြင်း၊ အညိုအမည်းစွဲလွယ်ခြင်း၊ သွေးယိုခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ တုပ်ကွေးလကဏာများ
အဖျားအကြီးခြင်း၊ ကြွက်သားများတောင့်ခြင်း၊ ချွေးပြန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ အသက်ရှူမြန်ခြင်း
အတွေး အပြုအမူ ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း
ညဘက်အမြင်အာရုံလျော့ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်း၊ အလင်းခံနိုင်ခြင်း
အဆစ်နာခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ အကျိတ်များပေါ်ခြင်း၊ ကြွက်သားများနာခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊
နှလုံးခုန်နှေးခြင်း၊ သွေးခုန်နှုန်းနှေးခြင်း၊ မူးမေ့ခြင်း
မူးခြင်း၊ ဝေခြင်း၊ အိပ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ပြဿနာများ
ဝခြင်း၊ လက် ခြေထောက်များ ရောင်ရမ်းခြင်း
ပါးစပ်ခြောက်ခြင်း၊ နှာပိတ်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံဝါးခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Chlorpromazine (ကလိုပရိုမဇင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
သင်အခုသောက်နေတဲ့ဆေးတွေနဲ့ Chlorpromazine ဓါတ်ပြုတုံ့ပြန်ခြင်းတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဆေးအလုပ်လုပ်ပုံကိုပြောင်းလဲစေတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုပိုဆိုးစေတာမျိုး ဖြစ်စေကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေကိုရှောင်ဖို့အတွက် ခုသုံးစွဲနေတဲ့ဆေးတွေအကုန်လုံးကို ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပေးသူကိုပြောပြရပါမယ်။ ဘေးကင်းဖို့အတွက် ဆရာဝန်ညွှန်ပြချက်မရှိဘဲ ဆေးတွေရပ်လိုက်တာ၊ ပြောင်းလိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
အအေးမိခြင်း၊ ဓါတ်မတည့်ခြင်းအတွက်ဆေးများ၊ စိတ်ငြိမ်ဆေး၊ အိပ်ဆေး၊ အတက်ကျဆေး၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းအတွက်ဆေးတွေက နဲ့ဓါတ်ပြုတုံ့ပြန်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုဆေးများသုံးနေပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
သို့မဟုတ် အောက်ပါဆေးများသုံးနေပါကလည်း ဆရာဝန်ကိုပြောပါ-
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Chlorpromazine (ကလိုပရိုမဇင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Chlorpromazine ဟာ အစားအစာတချို့၊ အရက်တို့နဲ့ ဓါတ်ပြုတုံ့ပြန်ပြီး ဆေးအလုပ်လုပ်ပုံပြောင်းစေတာ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပိုများစေတာမျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးစမသောက်ခင် ဆရာဝန်၊ ဆေးပေးသူတို့နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Chlorpromazine (ကလိုပရိုမဇင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Chlorpromazine (ကလိုပရိုမဇင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Intramuscular: Initial Dose 25 to 50 mg. The dose may be repeated in one hour. Subsequent doses may be increased and given every2to4hours as needed.
Prompt control of severe symptoms: 25 mg intramuscular one time.
Intramuscular: 25 mg injection one time. If necessary, may give additional 25 to 50 mg injection in 1 hour.
It may increase gradually until effective dose is reached, usually 400 mg/day.
Intramuscular: 25 mg one time. If no hypotension occurs, give 25 to 50 mg every3to4hours as needed, then switch to oral dosage.
Intramuscular: 12.5 mg one time. It may repeat in 30 minutes if necessary and if no hypotension occurs.
Intravenous:2mg at2minute intervals. Do not exceed 25 mg. Dilute to 1 mg/mL.
Intramuscular: 12.5 to 25 mg, 1 to2hours before operation.
Intramuscular: If symptoms persist for2to3days, give 25 to 50 mg.
Intravenous infusion: Should symptoms persist, use slow intravenous infusion: 25 to 50 mg in 500 to 1000 mL of saline.
It can usually be discontinued after several weeks, but maintenance therapy may be necessary for some patients.
Intramuscular: 25 mg injection3to4timesaday until patient can take oral therapy.
Intramuscular: 25 to 50 mg given3to4times daily, usually in conjunction with barbiturates. Total doses and frequency of administration must be determined by the patient’s response, starting with low doses and increasing gradually.
Intramuscular: 25 to 50 mg diluted to at least 1 mg/mL and administered atarate of 1 mg/min.
ကလေးတွေအတွက် Chlorpromazine (ကလိုပရိုမဇင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Intramuscular: 0.5 to 1 mg/kg/dose every6to 8 hours
Intramuscular: 0.5 to 1 mg/kg/dose every6to 8 hours;
Chlorpromazine (ကလိုပရိုမဇင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေးပြား-10mg, 25mg, 50mg, 100mg, 200mg
ဆေးပမာဏများသွားသော အရေးပေါ်အခြေအနေမှာဆိုရင် ဆေးရုံကားချက်ခြင်းခေါ်တာဖြစ်ဖြစ်၊ အနီးဆုံးအရေးပေါ်ဖြစ်ဖြစ် ချက်ခြင်းသွားသင့်ပါတယ်။ လက္ခဏာတွေကတော့
Drug information handbook. Page 415-417